မယ်အေးသောင်းသို့ အညာကဘကြီးဘုန်းကြီးထံမှ ပေးစာ - Baganthar
သို့ မိပေါက်စီ ( ခ ) မယ်အေးသောင်း
ဘုန်းဘုန်းစာရေးလိုက်သယ်။ အကြောင်းထူးတော့ မရှိဘူး။ တပေါင်း – တန်ခူးမှာ ရွာဘုရားပွဲရှိသယ်။ ကားစီးလို့ ခေါင်းမမူးတတ်ရင် ညည်းအစ်ကို သောင်းဦးနဲ့ လာခဲ့ပါဦး။ အဲ—ညည်းကြိုက်သဲ့ ပြောင်းဖူး တော့ ရှိဘူးပေါ့လကွယ်။ အဲ—အကြောင်းမထူးဘူးဆိုပေတဲ့ ဟိုတစ်နေ့ကတော့ ညည်းမောင် အငယ်ကောင် သောင်းထူး ချောင်းနဖူးမှာ မြောင်းတူးရင်း သူများပျိုးခင်းထဲ ချော်ကျလို့ မတော်တဆ လျော်လိုက်ရသေးသယ်ဟေ့။ ဒါက စကားစပ်လို့ ကြားဖြတ်ပြောသာပါ။
ဒါနဲ့ ညည်းနာမည်က ပေါက်စီကနေ “အေးသောင်း”လို့ ပြောင်းထားသယ်ဆို။ ငါ့ရွာက ပျိုပျိုအိုအို နုနုရွရွနဲ့ ပုပုကွကွ ကြီးကြီးငယ်ငယ်မကျန်၊ ကျောင်းကကပ္ပိယနဲ့ သာမဏေရ သမဏံ၊ ရဟန်းရှင်လူ ငဖြူငမဲ နဲ့ အနူအရွဲတို့ နှုတ်ထဲမှာ “အေးသောင်း အေးသောင်း”ရယ်လို့ ဘေးကျောင်းက ပဋ္ဌာန်းရွတ်သလို အဟုတ်စွဲနေလို့ “အေးသောင်း”နာမည်ကိုသရုပ်ခွဲ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းသိအောင် တုတ်ဆွဲ ဓားဆွဲ စဉ်းစားလိုက်ရသာ အံမယ်—လက်စသတ်တော့ ရွာက မိပေါက်စီဖြစ်နေပါ ရောလား ဟေ။
အိမ်း—! ရွာက ညည်းအမျိုး ညည်းအဆွေ၊ ငါ့ဒကာ ဒကာမတွေလည်း ညည်းအကြောင်း သတင်းကောင်း ကြားလို့ နေကောင်းကျန်းမာနဲ စိတ်ချမ်းသာတော့ ရှိနေကြပါရဲ့။ သို့ပေတဲ့ အေးသောင်းရေ– ညည်းဦးလေး ဖိုးထောင်ကတော့ မိုးခေါင်လို့ ပျိုးမထောင်နိုင်သာ နှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုပြီး ကကျိုးကကြောင်နဲ့ ဟိုအကောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိုးမောင်ကို ရန်သွားရှာ သယ်လေ။ တော်သေးသာပါ့ကွယ်။ စိုးမောင်က ဖိုးထောင်ကို ကကျိုးကကြောင်လုပ်တဲ့အမှုနဲ့ ပျိုးထောင်ခွင့်မပေးဘူး လုပ်နေတာ။ အဲ့သာနဲ့ နေလုံးအထွက် ခြေသလုံးဖက်ပြီး တစ်အိမ်လုံးတောင်းပန်လိုက်လို့ ကျေအေးသွားသကွယ့်။
အေး—-အခုလိုကျေအေးပြီး ဘာမကြာ၊ ဟိုမအေပေး အာပလာ၊ ရွှေဌေးဆိုတဲ့ငကြာက ငွေလေးရွှင်တော့ ညည်းအဒေါ် မေအေးတင်ကို ထွေးခင်ကတစ်ဆင့် ရည်းစားစာ ပေးခိုင်းသတဲ့လေ။ တကယ်ဆို ရွှေဌေးနဲ့ အေးတင်က ထွေးခင်နဲ့ သိသယ်ဆိုပေမယ့် ငါးပိဝယ်တုန်းက မြောက်ပိုင်းမယ် တစ်ခါ၊ ကောက်လှိုင်းသယ်တုန်းက လှည်းပေါ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ပွဲတော်တုန်းက ပွဲခင်းထဲမှာ တစ်ချက်၊ဥပုသ်ကျောင်းတက်တုန်းက ဥပုသ်ဇရပ်မှာ တစ်ကြောင်းစ နှစ်ကြောင်းစ၊ ဒီလောက်ပဲ စကားပြောဖူးကြတာကို ငပေါအရူးထပြီး ရည်းစားစာ ပေးရလောက်အောင် ဇောင်းမထသင့်ဘူး မဟုတ်လားကွယ့်။
ကဲ ကဲ! ညည်းလည်း ရွာကသတင်း အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းတွေကြားရလို့ ဘုရားတ,မနေနဲ့ဦး။ အဲ–ဘုရားမတ,နဲ့ဆိုသာ စကားလှအောင် ပြောရသာပါ့။ ညည်းလည်း ဘုရား တရားမမေ့နဲ့ဦးကွယ့်။ အိပ်ရာဝင် အိပ်ရာထ နေ့စဉ် ဘုရားရှိခိုး၊ ငါသင်ပေးထားသဲ့ မင်္ဂလသုတ်နဲ့ သြကာသကန်တော့ချိုးတွေ ညည်း မမေ့သေးဘူး မဟုတ်လား မယ်ပေါက်စီ။
အိမ်း! “တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်” ဆိုသလို ရွာကနေပြောင်းသွားတဲ့ညည်းကတော့ လူပါပြောင်းရုံမက၊ နာမည်ကိုပါ အတွေးကောင်းကောင်းနဲ့ “အေးသောင်း”လို့ ပြောင်းလိုက်တော့ အရေးကောင်းဖို့ အကြောင်းဆိုက်တာပါ့လေ။ အဲ—အရေးကတော့ ဘာကောင်းသလဲ မမေးနဲ့၊ အခုဆို ကဗျာအရေးကောင်း အတွေးကောင်းတဲ့ ကလေးတစ်သောင်းလောက် ညည်းအိမ်မှာ အပြေးအောင်းနေကြသယ်ဆို။ ဆေးကောင်း ဝါးကောင်းရှိရင်လည်း နွားကျောင်းနေသဲ့ ရွာက ညည်းသူငယ်ချင်း ဂျမ်းစိန်တို့ အေးလှတို့ဆီ ပို့ပေးလိုက်ပါဦးဟဲ့။
ဂျမ်းစိန်က သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းပိန်လို့ ဆိုပြီး သန်းရှိန်တို့အိမ်တီဗွီထဲက ညည်းပုံအတိုင်း၊ သူ့တင်ပဆုံကို လိမ်ကာတွန့်ကာနဲ့ မနက်မနက်ဆို လယ်ကွင်းထဲမှာ အေရိုးဗစ်ဒွန့်တာတဲ့လေ။ သူဒွန့်လို့ ဝလာ မလာတော့ မသိဘူး။ သူ့အစ်ကို ငမြသာက တော့ သူ့နှမခမျာ လူ့ဘဝမှာ သက်တမ်းမစေ့ခင် ညည်းပုံကိုတွေ့လို့ ရူးရလေခြင်း လို့ စွပ်စွဲနေလေရဲ့။ ဟော—နောက်တစ်ယောက်က အေးလှ။ လူကြည့်တော့ အေးကအေးသာနဲ့၊ အံမယ်— ကလေးမရဲ့ အတွေးကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အရုပ်တင်ရုံနဲ့ ညည်းလိုရုပ်ရှင်ဆယ်လီ ဖြစ်ချင်သာသဲ့ မယ်ပေါက်စီရေ့။ အဲ့သည်တော့ ဘာလုပ်သယ် မှတ်တုန်း။ နွားကျောင်းသွားလည်း ယောဂီဝတ်စုံနဲ့ ချလပ် ချလပ်။ ကျွဲမောင်းသွားလည်း မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနဲ့ ချလပ် ချလပ်။ ဟော–ငါ့ကျောင်းလာတော့လည်း ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ချလပ် ချလပ်။ အိမ်း—ဟိုနား ချလပ် ချလပ်၊ သည်နား ချလပ်ချလပ်နဲ့ တစ်ချလပ်ထဲ ချလပ်နေကြသာ ညည်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငါနဲ့တော့ ဒိုးခပါပဲ မိပေါက်စီရယ်။
ကဲ ! မိပေါက်စီ! ဘုန်းဘုန်းပြောသာတွေလည်း များသွားပြီ။ ညည်းလည်း စာဖတ်ရသာမောရော့မယ်။ ကိုယ့်ရွာက ရွာသူတစ်ယောက် ရန်ကုန်ရောက်ပြီး နာမည်ကြီးထွန်းပေါက်နေသယ်ကြားလို့ ဝမ်းသာတကွနဲ့ လွမ်းစာသ–အဲ—ဟုတ်ပေါင်–ကျန်းမာရစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာစာ ပို့လိုက်သာပါ။ ဘကြီးဘုန်းကြီးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာချင်သာ ကတော့ ညည်းဘယ်လောက်အောင်မြင်အောင်မြင် ရွာက ဂေါပကမောင်ရွှင်လို ဘုရား, တရား မမေ့နဲ့ကွယ့်။ ညည်း ဘယ်လောက်ကြီးပွားကြီးပွား ရွာက သူကြီးသားလိုလည်း မာနကြီးမသွားလေနဲ့။ ညည်းဘယ်လောက်တိုးတက်တိုးတက် ရွာကထန်းတက်သမား ဖိုးချက်လိုလည်း အမျိုးအတွက်ကြည့်တတ်ရသယ်ကွယ့် မယ်ပေါက်စီရဲ့။
အိမ်း အိမ်း —- ဒါပါပဲကွယ်။ ဘကြီးရဲ့တူမ မိပေါက်စီ ( ခ ) မအေးသောင်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစီ။ သဗ္ဗေပေါက်စီ အဝေရာ ဟောန္တု ။ သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု ။ မှတ်ချက်။ ။ ညည်းအမေက ညည်းကြိုက်သဲ့ ဘာလချောင်နဲ့ ပြောင်းဖူးတွေ ထည့်ပေး လိုက်သယ်။ သည်လ မိုးနည်းလို့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်နဲ့ ပုဇွန်ကြော် မထည့်ပေးလိုက်နိုင်ဘူး။ ငွေလိုရင် မှာလိုက်ပါသဲ့။
ပုံ အညာကဘကြီးဘုန်းကြီး ဘကြီးကော ( it’s just popping Joke ) Wai Yan Soe Myint (လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်)
ငွေကြေး သိသိသာသာ ချောင်လည်စေသော ယတြာ